Ukusetyenziswa kunye neNzuzo yePlastiki ejongene nezixhobo
Ixabiso elithengelayo kodwa lisebenzisekayo lweZakhiwo zokwakha
Kukho iintlobo ezimbini eziphambili zeplastiki ezonakalisiweyo. Iphepha leplastiki eliqhelekileyo lisoloko libandakanya oko kubonakala kubekho iindawo ezintathu - iiplati ezimbini zeplati kunye nomgca weziko lokukhangela. Enyanisweni, ziyizona zibini zecala , ezibizwa ngokuba yi- twinwall plastic. Iiplastiki ezinokusetyenziswa zingathetha iiplastiki zeplastiki ezinjengomtsalane kwiprofayili kwaye zinokuqiniswa ngefrasi yeglasi. Zizodwa kunye kwaye zisetyenziselwa ukuphahla iigaraji kunye neendawo zokuhlala, kodwa abagadi begadi bawasebenzisa ukuba bakhe izitifiketi.
Apha siza kugxininisa kwi-twinwall version, eyaziwa njengebhodi yeplastiki ewonakalisiweyo okanye ibhodi yeplastiki ephothiweyo.
Iifomethe zePlastiki eziHlangeneyo zenziwe njani
Izinto ezisetyenziswayo ziquka i- polypropylene kunye ne-polyethylene, i-thermoplastics esetyenziswa kakhulu kunye neyandileyo. I-Polypropylene ine- ph neyindidi kwaye ayixhatshali kwiikhemikhali ezininzi kumaqondo ashushu aqhelekileyo, kodwa ingaxutywa ngezinye izithako ukubonelela ngokungafani nezinye izinto ezifana no-UV, ukulwa nokuxhatshazwa komlilo kunye nomlilo, umzekelo.
I-Polycarbonate isetyenziswe kwakhona, kodwa le nto ibaluleke kakhulu kwizinto eziphathekayo, ngokukodwa ngokubhekiselele kwintsebenzo yokumelana nokungathinteki, nangona kunzima. I-PVC kunye ne- PET nazo zisetyenziswa.
Kwinkqubo yokwenza umgangatho, iphepha lidlulelwe - leyo yiplastiki etyhidiweyo iphoswe (ngokuqhelekileyo kunye neendlela zokujikisa) ngokufa okunika iprofayili. Ukufa kufana ne-1 - 3 ububanzi bamitha, ukuhambisa umlinganiselo wobungakanani ukuya kuma-25 mm.
Amasu aseMono- kunye ne-co-extrusion asetyenziswa ngokuxhomekeke kwiprofayili ecacileyo efunekayo.
Iingenelo kunye nokuSebenza
Kwizakhiwo : Abathengisi bathi bayizinto ezifanelekileyo zokuvumba izivunguvungu kwaye ziphindwe kabili kuneglasi, amaxesha angama-5 alula ngaphezu kweplywood. Ayifuni ukudweba kunye nokugcina umbala wayo, itshintshe kwaye ayiyi kubola.
Isicatshulwa esikhonkcekileyo se polycarbonate sisetyenziselwa ukuphahla iindawo zelanga apho kugcinwa khona ukuqina kwayo, ukukhanya okulula kunye nokuqhaqhawulayo, kwaye ukuxhatshazwa kwefuthe eliphantsi akuyiyo ingxaki. Isetyenziswe kwakhona kwizakhiwo ezincinci ezifana nezendawo zokugcina izityalo apho umgangatho walo womoya unikezela ngokucwangcisa okuncedo.
Ukuncediswa kwabasebenzi: Izinto ezifanelekileyo ziyimfuneko yokukhusela ixeshana emva kokukhukula, inyikima kunye nezinye iintlekele. Amakhishithi alulayo athunyelwa ngomoya. Ukulula ukujongana nokulungelelanisa kwiifom zokhuni zabo ezingenanzi kwamanzi kunye nezibonelelo ezikhuselayo zinika izixazululo ezikhawulezayo xa zithelekiswa nezinto eziqhelekileyo ezifana neentente kunye ne-steel sheet.
Ukupakishwa: Iimpawu ezininzi, eziguquguqukayo kunye neempembelelo ezintle, i-polypropylene board ibonakala ngokufanelekileyo kwimpahla yokupakisha (kunye nemveliso yezolimo). Kugqithiseleyo ngakumbi kune-eco-friendly ngaphezu kokubumba okubumbwanga okungekho kwakhona. Iyakwazi ukufakwa kwisigxina, icatshulwa kwaye igalelwe ngokukhawuleza ngomkhwa wokuzilibazisa.
Umqondiso : Ufumaneka kwimimandla eyahlukeneyo, ipapashwe ngokukhawuleza (ngokusetyenziselwa ukushicilelwa kwe-UV) kwaye iyakwazi ukucwangciswa lula ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo - ubunzima bayo bokubaluleka bubaluleke kakhulu.
Ukufakela izilwanyana: Ziyimpahla enonxibelelwano enobunzima bendonga kunye nezinye izilwanyana zasemakhaya ezifakwe kuyo.
Izixhobo ezinjengeengqungquthela ziyakunikwa kuyo; ukungabonakali kunye nokulula ukuyihlambulula inikezela ukugcina ukugcina ukugcina.
Izicelo zezinto zokuzonwabisa: Iimodeli zisebenzisayo ukwakha ii-airplanes, apho ubukhulu bayo bunzima budibaniswa nokuqina komlinganiselo omnye kunye nokuguquguquka kwinqanaba elifanelekileyo linika iipropati ezilungele iphiko kunye nokwakhiwa kwe-fuselage.
Uncedo lwezonyango: Kwimeko engxamisekileyo, icandelo lephepha lingagqitywa malunga neliphulo eliphukileyo kwaye lifakwe endaweni eqaqambileyo, nokubonelela ngokukhusela nokukhuselwa komzimba.
IPlastiki ejongene nekamva: Ixesha elizayo
Ukusetyenziswa oku kuluhlu lwebhodi luboniswa ukubonisa ukudibanisa kwayo. Ukusetyenziswa okutsha kubonwa phantse yonke imihla. Ngokomzekelo, i-patent isanda kufakwa ukuba isebenzise amaqabunga amacwecwe (ezinye iindawo ezifakwe kwii-angles ezilungileyo) kwi-exchangers zomoya.
Ukufunwa kweplastiki okonakele ngokuqinisekileyo kuya kukhula, kodwa iiplastiki ezininzi ezisetyenzisiweyo zixhomekeke kwioli engcolileyo , iindleko ezibonakalayo zixhomekeke ekutshintsheni (kunye nokukhula okungenakukupheka) kwamaxabiso eoli. Oku kunokubonisa ukuba yinto elawulayo.
Ukusetyenziswa kweBleach kunye neVinegar
Ngaba Ingcinezelo Yomhlaba Iyakuthinta Ubuncitshiswa?
Ukucoca i-Cleaner iyakucoca i-Glass
Ngaba Unako Ukusela Amanzi Amanzi?
Hlonipha i-Brave ne-Happy Quotes Day Quotes
Inkcazo kunye neMimiselo yeeName
I-Principality of Sealand
Indlela Osebenzisa ngayo enye Isandla seBhola / iBridge Bridge Ukufezeka
Imfazwe YaseMerika: U-Brigadier General James Barnes